Thuthukisa Ukuthengisa Kwakho Nokukhiqiza Ngalawa ma-Hacks ayisithupha | Martech Zone
Nsuku zonke, kubonakala sengathi sinesikhathi esincane sokunakekela umsebenzi wethu. Kuyindida ngoba kunezinhlelo zokusebenza eziningi, ama-hacks namadivayisi asisiza ukuthi songe isikhathi kulezi zinsuku. Kubukeka njengezeluleko kanye namasu okufanele asongele isikhathi empeleni athathe umthelela omkhulu ekukhiqizeni kwethu.
Nazi ezinye zezindlela namathuluzi engiwasebenzisayo ukuzisindisa mina neqembu lami lokuthengisa isikhathi esithe xaxa nokwenza ngcono umkhiqizo wethu jikelele.
Hack 1: Landelela Isikhathi Sakho Ngokwenkolo
Kade ngisebenza ukude iminyaka engaphezu kwengu-10 manje futhi ngiyawenyanya ngokuphelele umqondo wokulandela isikhathi sakho njengoba usebenza. Angikaze ngiyisebenzise ukuhlola abasebenzi bami, kepha ngithole lokho kungaba wusizo ngempela kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Cishe isikhathi esingangenyanga, ngilandelele isikhathi sami kuwo wonke umsebenzi engiwenzile. Ngemisebenzi eyinkimbinkimbi njengokusebenza kuhlelo lwethu lokumaketha entweni elula njengokubhala i-imeyili. Ngigqugquzele abasebenzi bami ukuthi benze okufanayo inyanga yonke, bezenzele amarekhodi abo. Imiphumela ivule amehlo.
Sabona ukuthi isikhathi sethu esiningi sichithwa kanjani emisebenzini engenamsebenzi ngokuphelele. Ngokuvamile, sichithe usuku lwethu oluningi sibhala ama-imeyili nasemihlanganweni, senza umsebenzi omncane impela. Lapho sesiqale ukulandela isikhathi sethu, sikwazile ukubona ukuthi singakanani isikhathi sethu esasichithwa empeleni. Sibone ukuthi iqembu lethu lokuthengisa lichithe isikhathi esiningi kakhulu lifaka idatha ku-CRM yethu esikhundleni sokukhuluma namathemba nokuthengisa kwethu isoftware yokuphakamisa. Sigcine siyiqedela ngokuphelele inqubo yethu yokuthengisa nokuphathwa komsebenzi wokuhamba komsebenzi ukuze kusetshenziswe isikhathi.
Iziphakamiso Ezingcono zikwenza ukwazi ukudala iziphakamiso ezinhle, zesimanje ngemizuzu. Iziphakamiso ezenziwe ngaleli thuluzi zisuselwa kuwebhu, ziyalandeleka futhi ziyaguqula kakhulu. Ukwazi ukuthi isicelo sivulwa nini kukusiza ukuthi ulandele ngesikhathi esifanele, futhi uzothola isaziso lapho isicelo silandwa, sisayinwa noma sikhokhelwa ku-inthanethi. Shintsha ukuthengisa kwakho, ujabulise amaklayenti akho futhi uzuze ibhizinisi eliningi.
Bhalisela iziphakamiso ezingcono mahhala
Hack 2: Yidla Ixoxo Elibukhoma?
Okokuqala, angikukhuthazi ukuthi empeleni kudliwe amaxoxo aphilayo. Kukhona isicaphuno esidumile sikaMark Twain owathi kufanele udle ixoxo eliphilayo into yokuqala ekuseni. Ngaleyo ndlela, wenze into embi kakhulu engenzeka ngosuku futhi konke okunye okwenzekayo kungaba ngcono kuphela.
Ixoxo lakho elibukhoma ngumsebenzi omubi kakhulu ohleli phezulu kohlu lwakho lwezinto okufanele zenziwe. Kimi, kuphatha amathikithi okusekela amakhasimende. Njalo ekuseni lapho ngivula ilaptop yami, nginikela ihora noma amabili ekufundeni nasekuphenduleni ama-imeyili amakhasimende. Ukuphumula kosuku kuzwakala njengomoya ohelezayo. Eqenjini lami lokuthengisa, ngincoma ukwenza into efanayo. Abantu abehlukene banemibono eyehlukene yokuthi yini yabo phila ixoxo is, ngakho-ke angiphakamisi umsebenzi uqobo, kepha ngincoma ukwenza imisebenzi enzima kunazo zonke ekuseni.
Hack 3: Sebenzisa Ubufakazi Bomphakathi beWebhusayithi Yakho
Ukuthola ukuthengisa okuningi ngezindleko zokumaketha isikhathi nemali. Ngaphezu kwalokho, ukuza nezindlela ezintsha zokuthola amakhasimende kudinga ucwaningo oluningi nokusebenza kanzima. Kepha kunendlela yokuthola ukuthengisa okuningi ngaphandle kokusebenzisa enye imali - kusetshenziswa ubufakazi bezenhlalo.
Leli qhinga lokumaketha licwaningwe kahle futhi kufakazelwe ukuthi lisebenza ezimbonini ezahlukahlukene ezahlukahlukene. Kalula nje, kufanele usebenzise isipiliyoni samakhasimende akho akhona nomkhiqizo wakho ukukholisa amakhasimende amaningi ukuthi asebenzise imali nawe.
Izinhlobo ezidumile zobufakazi bezenhlalo zifaka izibuyekezo, izincomo, ubufakazi, izaziso zokuguqulwa nokunye okuningi. Kukhona nezindlela zesimanje eziningi njengezaziso zokuguqulwa.
Uma usuvele unamakhasimende anelisekile, ukusebenzisa okuhlangenwe nakho kwabo endaweni efanele kuwebhusayithi yakho kungenza umthelela omkhulu kuzinga lakho lokuguqulwa kanye nezinombolo zakho zokuthengisa. Kodwa-ke, asikho isisombululo esilingana nobukhulu obufanayo futhi kudinga ukuhlolwa okuthile ukuthola ifomula elifanele lobufakazi bezenhlalo. Izindaba ezinhle ukuthi, iyasebenza futhi isebenza kahle impela.
Hack 4: Thatha The Sale Online
Amathimba amaningi okuthengisa asasebenzisa indlela yendabuko lapho efuna ukuhlangana khona nomuntu ngaphakathi ukuze avale isivumelwano. Yize lokhu kunezinzuzo eziningi, kukhona ukwehla okukhulu futhi. Njalo lapho uphuma uya emhlanganweni, ulahlekelwa yisikhathi nemali eningi, ngaphandle kokwazi ukuthi umhlangano uzophenduka ukuthengisa yini.
Kunamathuluzi amaningi kulezi zinsuku enza kube lula ukuvala ukuthengisa ukude. Izinhlelo zokusebenza zenkomfa ezifana ne- Zoom ikuvumela ukuthi wenze ikholi yevidiyo ngaphambi kokuhlela umhlangano mathupha. Ngaleyo ndlela, noma ungakutholi ukuthengisa, uzolahlekelwa kuphela yimizuzu engu-15 yesikhathi sakho esikhundleni sosuku lonke ukuvakashela lokho okulindelwe.
IHack 5: Qondanisa Amathimba Wakho Wokuthengisa Namaketha
Ezinkampanini eziningi engangizisebenzela, inqubo yokuthengisa yahlanganiswa ngesizathu esisodwa esilula. Umnyango wezentengiso wawungazi ukuthi umnyango wezokukhangisa wenzani ngokuqukethwe kwawo nezinto zokumaketha futhi ngasikhathi sinye, umnyango wezokumaketha awunalo nhlobo ulwazi lokuthi yikuphi ukuthengisa okuhlangana nabo nsuku zonke. Ngenxa yalokho, imininingwane eminingi iyalahleka futhi yomibili iminyango isebenza kabi.
Ukugcina womabili amaqembu ekhasini elilodwa, kubalulekile ukuba nemihlangano ejwayelekile lapho iqembu lokuthengisa nokumaketha lihola khona futhi namalungu angahlala ndawonye axoxe ngokwenzeka emnyangweni ngamunye. Ukumaketha kudinga ukwazi ngokusebenzisana nabathengisi abanakho namakhasimende. Ngasikhathi sinye, ukuthengisa kumele kwazi ngokuqukethwe okubhekene namakhasimende kwakamuva ukuze bakwazi ukuvumelanisa indlela yabo lapho bexhumana namathemba amasha. Konke okudingekayo yimizuzu engu-15 ngeviki futhi kokubili kwakho ukuxhumana kweqembu nokukhiqiza kuzothuthuka.
Hack 6: Qina Kakhulu Ngemihlangano Yokuthengisa
Uma umuntu ovela eqenjini lokuthengisa enomhlangano namakhasimende angaba khona, banesikhathi sonke emhlabeni. Kodwa-ke, emihlanganweni yangaphakathi, isikhathi sethu silinganiselwe kakhulu. Uyasikhumbula isikhathi esasilandelela? Sifunde ukuthi sichitha amahora ama-4 masonto onke emihlanganweni engenzi lutho ngezinjongo zethu zokuthengisa.
Kulezi zinsuku, sibeka yonke imihlangano yethu emizuzwini engu-15 okungenani. Noma yini edlula leyo ifanelwe i-imeyili futhi kuyisibonakaliso sokuthi i-ajenda yomhlangano ayimiswanga kahle. Okwethu ukubonga kwabasebenzi udlulile ophahleni futhi sigcina isikhathi esiningi kulezi zinsuku - sibonga le hack elula.
Iqembu elikhulu lokuthengisa liyisidingo senkampani efuna ukukhulisa imali engenayo kanye namandla okukhula. Lezi ngezinye zezindlela ezisemqoka esizisebenzisayo ukuqinisekisa ukuthi iqembu lethu lokuthengisa likhiqiza ngangokunokwenzeka, futhi ngiyethemba ukuthi uzithola ziwusizo. Mhlawumbe ukuthathwa okubaluleke kakhulu lapha ukuthi akukhona konke ukungena kwemikhiqizo okupheka kuya ezishintshayo naku-high tech - ungafinyelela izinto ezimangalisayo ngokushintsha nje ezinye zezindlela zakho nemikhuba yakho.
Tags: izaziso zokuguqulwaukuvumelaukuqondanisa nokumaketha nokuthengisaukuhlangana onlineamademo e-inthanethiukuthengisa onlineIsiphakamisoisoftware yokuphakamisaIzibuyekezoukuqondanisa kokuthengisa nokumakethaimihlangano yokuthengisaumkhiqizo wokuthengisaisiphakamiso sokuthengisaIziphakamiso Zokuthengisaukulandela ngomkhondo ukuthengisaubufakazi bezenhlalakahleubufakazi
U-Adam Hempenstall uyi-CEO noMsunguli Weziphakamiso Ezingcono, isoftware elula yokuphakamisa yokwakha iziphakamiso ezinhle, ezinomthelela omkhulu ngemizuzu. Esesizile amakhasimende akhe ku-Better Proposals ukuthi anqobe ama- $ 120,000,000 + ngonyaka owodwa kuphela, wethule iProposal Writing University yokuqala lapho abelana khona ngezindlela ezinhle kakhulu zeziphakamiso zebhizinisi.